IDakar kwisiXeko saseNew York naseWashington kwiAir Senegal ngoku
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Airlines » IDakar kwisiXeko saseNew York naseWashington kwiAir Senegal ngoku
Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • iindaba • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Iindaba zaseSenegal • Tourism • uthutho • Iindaba zeWired Travel • Iindaba zase-USA ezaphulayo • Iindaba ezahlukeneyo
I-Air Senegal isungula inqwelomoya kabini kabini ngeveki ukuya e-USA ukusuka eDakar, eSenegal.
I-Air Senegal isungula inqwelomoya eya kwisikhululo senqwelomoya saseNew York iJohn F. Kennedy.
I-Air Senegal ibhengeza iBaltimore Washington yamazwe aphesheya inkonzo yaseThugood Marshall.
Zombini ezi nqwelo moya zintsha ziya eMelika zisuka eDakar, eSenegal.
I-Air Senegal, umphathi weflegi yelizwe laseSenegal, namhlanje usungule inqwelomoya yokuvula inqwelomoya eNew York kwisikhululo senqwelomoya sase-New York kunye naseBaltimore Washington International eTrgood Marshall Airport, eyokuqala kwinkonzo entsha yeeveki ezimbini phakathi kweDakar nezixeko ezibini zaseMelika.
Inqwelomoya i-HC407 isukile eDakar's Blaise Diagne International Airport ngo-2: 56 kusasa yaza yafika kwisikhululo seenqwelomoya i-JFK eNew York (iTheminali 1) ngo-06: 51 namhlanje. Abakhweli abaya kwindawo yeMetropolitan Washington baqhubeka nolu hambo emva kokudlula kwi-Immigration kunye ne-Customs eNew York.
Inqwelomoya yafika kwisikhululo seenqwelomoya iBaltimore Washington (BWI) ngentsimbi ye-11: 08 kusasa apho inqwelomoya yamkelwa ngumkhahlelo wemvula wamanzi. Ukubuya ngenqwelomoya kuya kushiya iBaltimore ngo-08: 25 ngokuhlwa ENew York JFK (Itheminali yoku-1) yeDakar apho icwangciselwe ukuhlala ngo-12: 25 emva kwemini ngosuku olulandelayo.
Le nkonzo intsha iza kuqhutywa ngooLwezine nangeeCawe kusetyenziswa inqwelo-moya yohlobo lwe-Airbus A330-900neo, enikezela ngee-flatbeds ezingama-32 kwishishini, izihlalo ezingama-21 kuQoqosho oluPhambili kunye nezihlalo ezingama-237 kwiklasi yezoQoqosho, iinkqubo zokuzonwabisa, amandla esihlalo , kunye nokuhamba ngenqwelomoya kwi-Wi-Fi. I-Air Senegal ibonelela ngonxibelelwano olufanelekileyo kubahambi bayo base-USA ngeDakar kumacala omabini ukuya e-Abidjan, eConakry, eFreetown, eBanjul, ePraia, eBamako, eNouakchott, eDouala, eCotonou naseLibreville.
Kwi-2019, ngaphezulu kwesigidi sabakhweli babhabha phakathi kwe-USA neNtshona Afrika ekulindeleke ukuba ikhule ngakumbi ngokusungulwa kwale ndlela intsha. ISenegal lelona shishini likhulu laseNtshona Afrika kunye nehabhu yabakhenkethi kunye nekomkhulu leZizwe eziManyeneyo eNtshona Afrika.
U-Ibrahima Kane, iGosa eliyiNtloko lesiGqeba e-Air Senegal uthe: “Injongo yethu kukubonelela ngohambo olulula nolonwabisayo phakathi kwe-USA, iSenegal neNtshona Afrika. Indawo ekuyo iDakar idityaniswe nonxibelelwano oluninzi lwe-Air Senegal ngokusebenzisa indawo yayo ephambili kuzo zonke izixeko ezikhulu zaseNtshona Afrika iyakwenza ukuba le ndlela intsha ikhule ukusuka emandleni ukuya emandleni. Ukongeza, sinethemba lokukhuthaza ibango labakhenkethi baseMelika eSenegal ukuba baphonononge imbali yayo yenkcubeko, iilwandle ezikumgangatho wehlabathi kunye nokutya okungaqhelekanga kwilizwe liphela ”.
I-Air Senegal, ngumphathi weflegi yeRiphabhlikhi yaseSenegal. Idalwe ngo-2016, ngurhulumente ophantsi kwengalo yotyalo-mali uCaisse des Dépots et Consignation du Sénégal. Isekwe kwisikhululo senqwelomoya saseBlaise Diagne eDakar, eSenegal.